Seyogathi Redmond RYM-M5401: ukubuyekezwa, izincazelo, imiyalelo. Ungadliwa for yogurt
Ingungu yensimbi ekhaliswayo ngokushaywa uhlelo ezihlukahlukene zokuphila lula kakhulu. Eminyakeni embalwa edlule, inani elikhulu imikhiqizo emisha, okuyinto sake abaphefumulelwe babengayazi, futhi manje abakwazi ukucabanga ngaphandle kanjani kubo.
Ngakho, umenzi isinkwa futhi Multivarki yaqala ukubonakala esanda kutholakala, kodwa sibonga okwandile izindleko ongaphakeme kanye usizo, ukuvumela ukuba uchithe ezintweni ezincane zosuku nosuku isikhathi esincane. Lesi sigaba sisebenza ekhishini Imishini yogurt Redmond RYM M5401. Izimpendulo mayelana kuyokusiza ukuba wenze konke okuhilelekile, kuwufanele ukuthenga umsizi ekhishini ngokwayo. Ukuze uthole ukuhlaziywa okuphelele, kuqala sihlaziye lokho uthembisa ngokumelene ngumkhiqizi wayo futhi kungani sidinga kule divayisi.
Njengoba kunjalo nge multivarka, yogurt ingasetshenziswa hhayi kuphela ukupheka ngqo yogurt. It yenzelwe ukuguquka ubisi fresh futhi izithako wanezela kuso ezihlukahlukene imikhiqizo yobisi. Konke kuncike onjani izithasiselo futhi nhlama ebilisiwe izosetshenziselwa babuthane ingxube ingenalutho metal.
Ngenxa yalokho, ungase ukwazi kakhulu ukunciphisa izindleko ukuthola kokuqendwa imikhiqizo yobisi, uma ujwayele uwasebenzise ukupheka noma njengoba isidlo esihlukile. Seyogathi Redmond RYM M5401, intengo zazo kuhluka ruble ayizigidi 2,5, ngokushesha okhokhela uqobo futhi akusho hit ibhajethi umndeni. Kakade abaningi ulinganise lokhu ngaphandle kokuziphuca isithunzi.
Ngezinye izikhathi ukupheka umsebenzi yoghurts ayatholakala kweminye ekhishini Imishini, isibonelo, multivarka, kodwa kungcono ukusebenzisa kudivayisi inhloso yazo, njengoba endabeni, ungakwazi athole imiphumela emihle futhi ukunambitheka umkhiqizo osuphelile.
Sekuyisikhathi eside inkampani Redmond umise ngokwaso njengoba inkampani ye imishini ikakhulu premium intengo ingxenye, ngakho isembozo senziwa elihambisana nesitayela ocebile. Lokhu matt abamnyama ngemuva, okuyinto kuboniswa kudivayisi umnyuziki umbala uqobo kanye izici zayo ahlelwe kanye nezinzuzo ezinkulu. Phezulu isibambo eyenziwe ngepulasitiki, okuyinto ivumela ukuthi ucele kalula alethe ekhaya ukuthenga, uma imishini esitolo ekhishini alinikezi usayizi iphakethe.
Ngaphakathi, konke igcwele qualitatively, njengoba isethi ifaka izinto ingilazi tableware. It 8 nje izinkomishi, okuzokwenza kamuva ukulungiselela ubisi ahlukahlukene.
Seyogathi ngokwayo yakhiwe e-metal ne izakhi plastic, futhi usenza simethembe amandla futhi kusinika ithemba ukuthi ukugeza umzimba ngeke kube nzima kangaka. ikhava lwangaphandle yogurt Redmond RYM M5401 eyenziwe ngepulasitiki esobala nge isibambo. Ngayinye ingilazi ngabanye futhi inikeza siqu cap yayo encane ukukhiywa.
Naphezu isembozo okunomsoco ngesikhathi sokuthenga uyayalwa ukuba banake ubuqotho zonke izakhi, ngoba uma uthola ingilazi chipped noma ephukile ekhaya, esikhundleni yesiqinisekiso kwento ezilimele, uzobe kunqatshelwe.
Ngaphezu devaysa e bhokisi linezimpendulo amadokhumenti, kanye kunalokho olunzulu umbala incwajana ecwebezelayo, lapho ungathola ezihlukahlukene zokupheka yogurt, izincomo ukulungiswa imikhiqizo yobisi, kanye incazelo yokuthi isimiso yokusebenza noHlelo.
Ngaphandle yogurt Redmond RYM M5401, lapho impendulo ziyoba ngezamadodana ukuhlaziya eningiliziwe izinga e ekupheleni sihloko ulula ngaphandle izesekeli ezengeziwe. Lolu hlobo esitsheni, okuzokwenza sishiswa nangezansi ukuze kulondolozwe izinga lokushisa ethile ngaphakathi izinkomishi wahlela. Kungaba anakekele 8 Nokho kanye izibuko ephelele, uma uthanda, ungakwazi ukujabulela izitsha zabo, esikahle sokuba wena ububanzi kanye nosayizi. Okubalulekile, kangangokuthi kuyavumelana ngaphakathi kwemboni inkomishi yogurt.
Inner usayizi ekhishini umsizi imayelana 30 * 14 cm. Ngesikhathi Ubukhulu efanayo zangaphandle, ngokuvumelana Ukucaciswa yomenzi ayalingana 215 * 335 * 160 mm, okusho ngokuvamile ikuvumela ukuba ubone kuwo idivayisi kwetfulwe ezihlangene ukuthi ngeke ziphazamise ngisho ikhishi elincane. ngaleyo ndlela Isisindo sayo ifinyelela 3.2 kg.
Yiqiniso, insimbi engagqwali kusuka lapho umzimba kwenziwa, kumele ixhunywe endaweni ethile e-elementi eyodwa. Leli lunga uzifihle ngokucophelela ohlangothini emuva, ngakho akuyona sobala. Ngaphezu kwalokho, kwenziwa izinga kahle eliphezulu, ngakho-ke abakwazi ukhathazeke ukuthi ngokusebenzisa kungase ukuwela doti futhi umswakama.
Phansi yogurt senziwa ngokuphelele plastic. pads ezinemilenze samanje iraba eklanyelwe bengavumi ukukunika yena ithuba umbukiso ku poverhnosti.Poetomu ungaqiniseka ngokuthi ngeke phuma etafuleni ukunyakaza inobudlabha futhi ingane ngeke bakwazi udonse kwalo intambo ukulengiswa.
Konke lokhu kusikisela ukuthi, uma hhayi yogurt engcono, okungenani-ke olungele ivuliwe isihloko.
Ukuze sibhekane ukulungiselelwa kanye iinthombe yogurt ukhona yini nje umuntu, ngisho ingane. Phela, isetshenziswa kuphela izinkinobho ezimbalwa ezilula kanye nesikhombisa ingxenye LED ukuthi ubonisa Izinombolo ezimbili kuphela. Laba bobabili ngomqondo ongokoqobo - izinkinobho ezimbili kuphela, nokuthi kulungiselelwa timer bese uqale / stop bafudumale. Konke lokhu eyinkimbinkimbi ne iinthombe ekupheleni.
Ukuze uqale ukupheka, nje ukhethe zokupheka efanelekayo yogurt, ngokusho kwakhe ukuxuba izithako ebhodweni, bawumisa phakathi isitsha bese usetha timer isikhathi esithile, bese uqala inkinobho yamandla. Besakwazi ukwenza lutho, kuphela silinde isiginali umsindo ekhombisa ekupheleni ukupheka.
Kuyaphawuleka ukuthi soundtrack inikezwa phakathi nokuhlela, ngakho-ke uzohlala ukuzwa ngokucindezela ikhi noma cha. Nakuba inkambo izinkinobho angabonisi kuzibophezela, uma kungekhona touch, ngakho umzamo omkhulu akudingeki isicelo kuleli cala.
Ikakhulukazi zamabhodlela izibuko
Ngaphambi yokupheka, okwathi ngemva ubusuvele okulungiselelwe ingxube bazigcwalisa e izinkomishi for yogurt, abeka phezu ikhava ekhethekile yakhelwe ukugcina freshness umkhiqizo. Abasakwazi obukhulu, okwandisa isitoreji yogurt siphelile noma neminye imikhiqizo yobisi esiqandisini.
Ukuze kube lula, bakha enye umsebenzi ewusizo, ngaphandle uphawu esitsheni. Ngosizo phezulu plastic disc Ukujikeleza ungabekwa efasiteleni usuku lapho senziwa iyogathi, kokubili umenzi emaphaketheni yasekuqaleni. Lokhu kuzokuvumela njalo ukulawula freshness yayo, ngaphandle kokuvula isivalo waphinda, futhi qiniseka ukuthi umkhiqizo alilinyaziwe.
Usuku isethwe kuphela ngesimo izikhala zosuku, inyanga kulungiselelwa akutholakali, njengoba imikhiqizo yobisi kukhona imikhiqizo okonakalayo. Uma wayefisa, ungakwazi ukuthenga ehlukile izimbiza for yogurt Redmond RYM M5401 noma usebenzise glassware usayizi wesithombe sakho efanelekayo.
Amanye amathiphu ngokwenza yogurt
Kubalulekile nokukhumbula ukuthi imikhiqizo yobisi, engafanele kuphekwe noma elondolozwe ku izimo ezingalungile yingozi enkulu, ngoba anobuthi kubo elula. Ngakho-ke, kufanele ulandele izimiso ezimbalwa ezilula ukuthi uyohlale udle izinga jelly.
Futhi, lezi amathiphu kuzosiza ukubhekana nezindaba kanjani ukukhetha yogurt ukuthi kubalulekile ukwazi lapho ukhetha futhi lapho imingcele kuyoqondana ngokwanele esimweni sakho.
Sebenzisa izingxenye kuphela kusuka abakhiqizi omethembayo. Lokhu kuhlanganisa kokubili ubisi uqobo kanye isithokela iyibilisa ehlukahlukene asetshenziselwa ukwakha-izikhala Izingxube.
Gxila incwadi zokupheka, kodwa ungesabi ulinge, ukukhetha ukwakheka ezinjalo, okuzokwenza eziyojatshulelwa wena nomndeni wakho.
Akubalulekile ukudla imikhiqizo yobisi emva kosuku lokuphelelwa yisikhathi we amangalelwe izingxenye umakhi. Ngokuvamile, kulotshiwe kwi isembozo ngemvubelo. Ukufanisa isimo sangempela, njalo izinkomishi zamabhodlela abilayo usebenzisa amanzi abilayo kanye qualitatively ubageze ukuhlala phezu izingqimba kobuso umkhiqizo ubudala, uzilungiselele usebenzisa yogurt. Usezingeni izithako engcono emndenini ngamunye yayo.
Uma uhlela on ukwenza izingilazi ezimbalwa, hlambulula ingxube kuyoba lula isitsha esikhulu, bese uwathele e- isitsha. Ngakho-ke kuyoba eyohlobo ngaphezulu kanye isilinganiso olinganise kuyoba iyunifomu.
на составляющие компоненты. Phakathi ukupheka akutuseki ukuze uhlele yogurt ngoba ubisi kungenziwa ukubola zibe izingxenye.
imikhiqizo Iphele kufanele ngokushesha ukuhlanza imbala. Ngakho ngeke kuselule kuphela ukuphila eshalofini kodwa futhi uthuthukise ukunambitheka lokho ngeke bakwazi ukwenza yogurt zabo Redmond RYM M5401. Cottage shizi, ngasendleleni, kungabuye kwengezelwe kwabantu mkhulu futhi ukunambitheka kangcono umkhiqizo osuphelile.
Ngokusebenzisa la macebiso, ungahlala ukulungiselela yogurt okumnandi. Ukuze uvumele ubuncane amaphutha, emva ukuthenga, ngokushesha ukushiya imishini esitolo ekhishini, ngokucophelela ufunde imiyalelo yokusebenzisa yedivaysi. Lokhu kuzokwenza lula nje kuphela ukusetshenziswa kodwa futhi uzoqhubeka ebasiza ukuphila inkonzo yayo nakho zivikela amaphutha amabi ekusebenziseni yayo.
Ngokuqondene namandla ukusetshenziswa, lapho ukubala izindleko akunzima kangako. Elementi esetshenziselwa amalahle isitsha ezishintshayo Imininingwane kudle Watts 50 kuphela ngehora. Isikhathi esimaphakathi wokwenza yogurt kuyinto amahora 8-12, okusho ukuthi Kubiza ngesikhathi esisodwa ngeke idlule ukubaluleka 0.5 kilowatts kukagesi. Lena inkomba kuhle ngenxa yogurt.
Usezingeni the best energy esisindisa ekhishini amadivayisi ipharamitha ke iholwa i ngenjongo ecashile, ngaphambi ezifana brand owaziwa njengo Cuisinart futhi Tefal. Noma kunjalo, ngenxa yezizathu umnotho, kutuswa ukuba ugcwalise zonke izibuko 8 endaweni akuyona lutho, ngokuhlala lutho.
Zonke okungenhla ulwazi olusemthethweni kamakhi, futhi, njengoba sazi, unjiniyela uyohlale bagomela ngokuthi unalo yogurt engcono, kodwa lokhu akunjalo ngaso sonke isikhathi.
Kulokhu, ukuqonda ngokuthi liyini ngempela esikukholelwayo nangalokho cha, ukusiza abasebenzisi ukubuyekezwa, wathenga idivayisi esikhathini esithile esidlule futhi kwadingeka ithuba ukuhlola izinga layo ukuze kuvumelane ezibekiweko. Kulesi sisekelo, kungase Baveza eminye omuhle, ngokuvamile ebizwa ukuba:
It ubhekana kahle umsebenzi walo. Njengoba abasebenzisi wanelisekile, yogurt Redmond RYM M5401, ukubuyekezwa zazo zingatholakala kwi izinkundla kaningi, has a enamandla Ukushisa isici futhi izinga lokushisa Ukushisa kwanela ukulungiswa eliphezulu imikhiqizo yobisi esikhathini esifushane yesikhathi. Nokho, ikakhulukazi, ihlala yodwa ukulungiselela kahle zonke izithako ukufudumeza ukwelashwa, kanti yogurt isivele bawenze kahle umsebenzi wabo.
Okuhle izingxenye izinga. Seyogathi izinkomishi kanye zamabhodlela ukuthi bayeza ne-yogurt, abenziwe ngezinto eziqinile. Glass linamandla ukwethusa, futhi akubonakali chips futhi izimpawu zokuguga. Ihlanganisa kuhle okuqinile, plastic ayishintshi impahla yayo futhi ayinakho iphunga ezingemnandi.
Ukuba khona isignali umsindo. Njengoba ngesikhathi kulungiselelwa, futhi ekupheleni isaziso uhlelo umsindo kusiza futhi kusiza ukusebenza. Ungahlala ukuzwa uma ukumisa kabusha izibuko nge imikhiqizo yobisi esiqandisini, kanye azi ngoba isiqiniseko sokuba inkinobho wasebenza.
A yenqwaba ingqikithi iziqukathi ukupheka. Njengoba kushiwo ngenhla, ingilazi ngamunye angazamukela kuze kufinyelele 180 namamililitha uketshezi. Ngisho noma ungenayo ugcwalise kubo phama, ngesikhathi esisodwa, ungenza ezingaphezu kuka ilitha yogurt, okuyinto yalokho kuhle.
ukubukeka ekhangayo futhi ezingokoqobo. Seyogathi Redmond RYM M5401, metal silvery ukuthi kubukeka kahle futhi akusho konakalisa nomfanekiso waso, kunemibhalo futhi wathola inflicted izinga upende asenzi washable ngesikhathi wokuhlanza ikhava, sisivumele alingeni kunoma yiziphi elingaphakathi, ngisho ezenziwe design ultra-yanamuhla.
Ukuba khona nje veza wedijithali. Ulwazi wabonisa kuso lula kulungiselelwa timer futhi ikuvumela ukuba wenze ukufakwa ngisho nalabo abasebenzisi kwesikhathi sokuqala kwe-idivayisi ungazange ufunde imiyalelo yokusebenza ngaphandle kwezinkinga. Ngaphezu kwalokho, libonisa Countdown kuze kube ihora elingu-1, okuvumela ukulawula inqubo.
imishini obuhle Cookbook enemininingwane mayelana nemikhiqizo yobisi. Ngisho noma ungakaze wazama ukupheka yogurt okuzenzela, ngemiyalelo e ncwajana ephelele, ukuhlinzwa ezinjalo ngeke kube nzima kakhulu.
Ngokuvamile, njengoba kungabonwa kusukela imicabango yabantu ikhasimende ngenhla, ikhishi umsizi zaphumela kuhle futhi kwakuqala ukwanda phakathi kwabasebenzisi. Nokho, zikhona izici ezimbalwa ezimbi, nabo baqaphela. Uma ukuthenga kudivayisi kufanele ucabange ngokuthi uzimisele ukubabekezelela.
zikhathi Negative e ukubuyekeza
Njenganoma yimuphi omunye electronics, yogurt Redmond RYM M5401 ukubuyekeza hhayi kuphela omuhle. Kusobala ukuthi kukhona amaphutha kuyo. Kwamanye bangase babonakale ezibucayi, ezinye, ngeke uhlupho nhlobo. Phakathi kwabo kukhona ethandwa kakhulu, kube wabhekana ezingaphezu kweyodwa umsebenzisi futhi ngeke kukhonjwe ekwenzeni umshado owodwa.
Abanye abasebenzisi ungathandi umsindo. Kwezinye amaqembu, entengantenga, kwabanye akusiyo ngempela umsindo emnandi, okuyinto ecasulayo ezingaphezu kuka umsebenzi ulwazi asiphethe.
Akubona bonke, basutha, futhi ubude ephelele intambo kagesi. Ukuze eziningi, wayengeyena kancane esifushane, futhi okwakufanele ngiyisebenzise ngentambo isandiso wabheka yini nobuhle obukhona kakhulu olumnandi, futhi kwezinye izimo neze ephephile. Esikhundleni salo, njengoba e multivarok kakhulu, akunakwenzeka, ngoba ixhunyiwe ngqo, kunokuba ngokusebenzisa Isixhumi okhethekile.
Isikhathi esiphezulu we timer emahoreni angu-12 zokupheka ezithile sabonakala enganele. Hlale ukhumbula lokhu uma uhlela ukuba apheke okuthile "eside edlala". Njengoba esinye isixazululo senkinga - ukuqala kabusha uhlelo ngesikhathi edingekayo emva amahora 12.
Akukho ukulawula lokushisa. Ngokusobala, kuye ngokuthi izimo zemvelo, abasebenzisi njalo wabhekana neqiniso lokuthi ifomula usana nje ebilayo, yalokho okwenzeka is hhayi ukupheka kahle.
Lona yonke nemibi, elalibheke iningi. Uma ungayiboni inkinga enkulu, ungakwazi ukuthenga ngokuphepha kule divayisi.
Ngalesi sihloko, Manje usuyazi ukuthi ukhethe yogurt. Okufanele ukwazi lapho ukuthenga esitolo? Qaphela ukuhlola iphakeji ubuqotho zonke izakhi, futhi ukuthenga kwakho ngeke ukuphoxe.
Seyogathi kuyinto godsend ngoba Imikhaya enezingane ezisencane, ngoba kungenzeka ukulungiselela baby ukudla, ukwazi ukuthi yini izithako kuwo. Futhi uma nje fan of imikhiqizo yobisi, lizoba umsizi esisemqoka futhi bakwazi ngokuqinile ugcine ibhajethi umndeni.
Into esemqoka lapho ukhetha ukuba sicabangele iqiniso lokuthi libuye libe nezihibe futhi ungalindeli ke kakhulu. Khona-ke uyoba zikujabulela uyisebenzisa futhi ngeke udumazeke.
Kwathi irharideni yokukhanya - nemiklamo LED ukusetshenziswa endlini futhi ongaphandle
Irbis tx69 - imodeli ukubuyekeza, izibuyekezo zamakhasimende nochwepheshe
Amabhethri D: Uhlolojikelele, izici
Yini ibhethri isilawuli. Isilawuli icala Li-Ion-ibhethri
Amathiphu balimi uma ukutshala petunia
Ukukhuthazela, unya futhi ulwela umbono - lena nencazelo yegama Boris
Iholide elincane akuyona isinqumo! Imibono yokudalwa kokudala
Izifo ze-venereal kubantu
Acinene Futha 'Nazoneks'. Yokusetshenziswa
Lapserdak: kuyini? amaqiniso ezithakazelisayo